China Generation faharoa 30-mirefy saribao grill Manufacturing sy Factory | Chuliuxiang
Generation faharoa 30-inch charcoal grill
Sakafo misy tsiron-tsaribao miaraka amin'ny CLUX Charcoal Grill. Ny makarakara fandrahoan-tsakafo vita amin'ny vy miaraka amin'ny tahony mampiakatra dia manamora ny fampidirana saribao voalohany. Amboary ny hafanana amin'ny fampiasana ny harona fanandratana saribao ho an'ny hamburger na steak efa masaka tsara.
Ny grille karbonika 30-inch vao noforonina dia nanampy fiasa vaovao eo amin'ny endriny sy ny fiasa, ary ny velaran'ny harato dia lehibe toy ny taloha.
Fanamboarana saribao ivelan'ny lakozia vaovao
Fitaovana tontonana Inôksa
Haben'ny vokatra 860*600*480mm
Faritra mahandro sakafo 1296*213mm
Style mpifoka barbecue grills
Ity makarakara saribao lehibe ity dia vita amin'ny akora vy tsy misy hafanana mahatohitra hafanana, mafy sy tsara abrasive fanoherana, tsy misy harafesina, tsy misy miolakolaka, maharitra sy maharitra, tsy manimba ny vatan'olombelona, ​​ampiasaina nandritra ny taona maro tsy misy olana. Mety tsara ho an'ny saribao azo entina any ivelany ho an'ny fitobiana, fandrahoan-tsakafo an-kalamanjana, mpifoka sigara ao an-jaridaina, fitsangatsanganana ary tailgating barbeque grill.
INTELLIGENT GRATE-IN-GRATE-SYSTEM - Noho ny rafitra grate-in-grate an'ny trolley grill, izay azo itarina saika tsy misy fetra, dia azo tanterahina ny fanirian'ny grill rehetra ary, ankoatra ny zavatra hafa, ny wok matsiro, legioma na ovy dia afaka. ho sarotiny.
ADJUSTABLE COAL LEVEL & EXTRA SHELF - Ny haavon'ny saribao azo amboarina amin'ny haavony dia miantoka ny fanaraha-maso tsara indrindra ny mari-pana. Ny tombony iray hafa amin'ny sarety makarakara charcoal dia ny toerana fitehirizana fanampiny miaraka amin'ny farango eo amin'ny sisiny mba hitehirizana tsara ny sakafo natono, ny akora ary ny kojakoja mangotraka.
VENTILATION SPECIAL - Ny fisokafan'ny rivotra manokana amin'ny grille charcoal dia miantoka ny fikorianan'ny rivotra voalanjalanja mandritra ny dingan'ny fandoroana ary manakana ny saribao tsy hivoaka rehefa mihidy ny sarony.
NOBLE LOOK & FUNCTIONS SPECIAL - Ny fitoeran'afo mifono vovoka miaraka amin'ny tahony vy tsy misy pentina volafotsy dia manome endrika mendri-kaja ny grill BBQ. Ny fitaovana fanangonana lavenona miaraka amin'ny tahony vy tsy misy pentina sy ny fanokafana tavoahangy dia mameno ny endri-javatra amin'ny giro.
MOBILE - Ny kodiarana dia mahatonga ny grille barbecue ho mora mihetsika sy mampifanaraka tsara. Noho ny tongony mafy, ny trolley charcoal grill dia mijoro tsara amin'ny toerany.
teo aloha: 4 + 1 Fandoroana vy tsy misy vy bbq grill
Manaraka: Mpanamboatra an'i Shina 24inch Heavy Duty Adjustable Cooking Haavo Saribao BBQ Grill
30 mirefy saribao grill
griller bbq hazo
mifoka sigara combo grill
Saribao seramika loko fotsy
Lafaoro pizza seramika 21 santimetatra
Heavy Duty Drum Pit Barrel Grill
Trolley charcoal grill vaovao tonga